years Archives - Oz History Mine
Welcome to House of History. Last week we looked at the first of the Hohenzollerns and the complex marriage and inheritance politics that led toaterritory that somewhat resembled what would one day be known as Prussia. As these inheritance claims came to fruition the Thirty Years’ War broke out, one of the bloodiest …
January 10, 2020Articles, BlogComments: 46
ဟောလိုဝင်းနေ့ဆိုတာ ဘာလဲ..အဲ့နေ့ကိုနှစ်တိုင်း အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ဗြိတိန်န်ိုင်ငံနဲ့ မြောက်အမေရိကားနိုင်ငံနဲ့ တခြားအာရှနိုင်ငံတွေမှာပါ ကျင်းပကြပါတယ်။ တခြား အားလပ်ရက်တွေလိုပဲ.ဟောလိုဝင်းနေ့က ခရစ်ယာန်ရိုးရာဓလေ့နဲ့ ရုပ်ပွား-ရုပ်တု-ဆင်းတု-ကိုးကွယ်သူ။ အယူလွဲသူ။ ဒိဋ္ဌိ။ paganlism မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒ။ ရုပ်တု-ဆင်းတု-ရုပ်ပွား-ကိုးကွယ်ခြင်း ဓလေ့ သမိုင်းကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်လောက်က ဆစ်လို့ခေါ်တဲ့ လူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလူမျိုးတွေက ခုတော့ အိုင်ယာလန်နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံြေ မာက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့က သူတို့ရဲ့ နှစ်သစ် New Year’s day ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့က New Year မတိုင်ခင်ည အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက် မှာ ရှင်သန်ခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းတို့ အတူတူ လာကြတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ နောက် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ထောင်လောက် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာ နိုဝင်ဘာလ …
Time makes sense in small pieces. But when you look at huge stretches of time, it’s almost impossible to wrap your head around things. So let’s start small with minutes, hours, days. You probably spent the last 24 hours mostly sleeping and working, with some coffee in there somewhere. Please watch less TV. Now let’s …
The history of the Red River Showdown | KVUE
FINALLY FINALLY HERE.. FINALLY HERE.. AND FINALLY HERE.. AND WE’RE FINALLY HERE.. AND WE’RE JUST FINALLY HERE.. AND WE’RE JUST OVER FINALLY HERE.. AND WE’RE JUST OVER -12- FINALLY HERE.. AND WE’RE JUST OVER -12- HOURS AND WE’RE JUST OVER -12- HOURS AND WE’RE JUST OVER -12- HOURS AWAY AND WE’RE JUST OVER -12- HOURS …
Most Extreme Punishments Given To Prisoners
September 2, 2019Articles, BlogComments: 98
Albert Einstein once said if you put your hand onahot stove foraminute it seems like an hour and if you sit withapretty girl for an hour, it seems likeaminute. We expect the same applies to prison. A minute in jail would seem like forever and an hour …